Ny Apple Watch Series 3 dia manana ny androny | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple Watch Series 3 dia nisaina ny androny
Toni Cortes | 30/05/2021 17:00 | Apple Watch
Al Apple Watch serial 3 Manana fampandrenesana telo sisa velona izy. Ny orinasa dia mitazona azy ao amin'ny katalaogin'ny vokatra satria mbola amidiny tsara. Mandritra ny 219 Euros dia azonao atao ny mividy ilay smartwatch Apple raha tsy miraharaha ny vaovao momba ny andiany manaraka ianao, saingy tamin'ity herinandro ity dia niatrika fihemorana lehibe izy io.
Noho ny fitahirizany voafetra, manomboka izao dia tsy maintsy averinao amin'ny laoniny ilay fitaovana isaky ny te-hametraka fanavaozana vaovao ianao. Tena fanaintainana amin'ny boriky. Ny fialan-tsiny tonga lafatra hividianana Apple Watch vaovao raha toa ianao ka efa niaraka tamin'ny andian-tsarinao nandritra ny taona vitsivitsy. Nefa tsy ekena ny hividiananao azy vaovao, ary hahita "volontsôkôlà" toy izany. Ka ny zavatra lojika indrindra (sy ny saina) hatao dia ny fanesorana azy amin'ny Apple Stores.
Toy ny efa naneho hevitra izahay Roa andro lasa izay, mpampiasa Apple Series Series 3 dia nanana olana lehibe tamin'ny fanavaozana ny watchOS. Na dia manavao ny iPhone izay ampifandraisina aza iOS 14.6.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy averinao amin'ny laoniny aloha ilay fitaovana. Vantany vao tafaverina amin'ny laoniny ianao dia efa manana fitehirizana maimaimpoana ampy hanatanterahana ny fanavaozana. Tena "fanaintainana amin'ny boriky", raha heverintsika fa Apple dia mamoaka fanavaozana isaky ny roa ka hatramin'ny telo.
Tonga ny olana satria ny Apple Watch Series 3 ihany no manana 8 GB fitehirizana. Mihoatra noho ny tamin'ny nanombohana azy tamin'ny taona 2017, saingy tsy ampy anio. Etsy ankilany, ny maodely Apple Watch Series 3 LTE, dia manana tahiry roa heny, 16 GB, mihoatra ny ampy hanavaozana ny fitaovana androany tsy misy olana.
Ka raha efa nanana Apple Watch Series 3 ianao nandritra ny taona vitsivitsy izao dia efa manana fialantsiny tanteraka ianao hitsambikina a Andiany 4 na 6. Ny toa tsy "marina" amiko dia ianao mividy fitaovana androany ao amin'ny Apple ary tokony hamerina azy io ianao isaky ny misy fanavaozana satria tsy ampy ny fitehirizana azy.
Vahaolana amin'ny olana
Mahaliana fa ny kinova LTE an'ny Series 3 dia manana fitehirizana indroa noho ny Wi-Fi irery.
Ny fahafantarana ny anton'ilay olana dia mazava ny vahaolana. Ny iray dia ho an'i Apple hanamboatra ny Series 3 miaraka amin'ny fitehirizana 16GB toa ny Andiany 3 LTE. Izay hiantoka ny fanavaozana ankehitriny ary angamba ny an'ny watchOS 8 manaraka.
Ny iray hafa dia ny handefa watchOS manokana ho an'ity andiany ity, izay tsy mila fitehirizana firy. Ary ny fahatelo, izay hampidina ny vidin'ny LTE ary hisintona ny Apple Watch Series 3. avy amin'ireo magazay. Ny tena mety, ary lafo indrindra ho an'ny orinasa dia ireo modely roa amin'ny Apple Watch Series 3 dia hesorina tsy hamidy, ary ny Apple Watch SE ho maodely ara-toekarena. Ho hitantsika eo ny ataon'ireo tovolahy Cupertino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch Series 3 dia nisaina ny androny